डिजिटल ढाँचामा प्यान्टोन क्याटलग कसरी पहुँच गर्ने? | क्रिएटिव अनलाइन
डिजिटल ढाँचामा प्यान्टोन क्याटलग कसरी पहुँच गर्ने?
प्यानटोन १ 1962 .२ को आसपास संयुक्त राज्य अमेरिका मा स्थापना भएको थियो, यो सबै क्षेत्रहरु मा डिजाइनरहरु द्वारा सबै भन्दा धेरै प्रयोग हुने रंग वर्गीकरण र संगठन प्रणाली मध्ये एक भएको छ। जस्तो तपाईलाई थाहा छ, र of्गको चयन कोड वा संख्या मार्फत वर्गीकृत गरिएको छ र धेरै विस्तृत छ, दश हजार भन्दा बढी भ्यारीएबलहरू कभर गर्दै। प्यानटोन क्याटलगमा राखिएको प्रत्येक शेडको एक पहिचानकर्ता हुन्छ र यस तरीकाले व्यावहारिक रूपमा असम्भव छ जब कुनै टोनलिटी छनौट गर्दा। यी त्रुटिहरू धेरै पटक देखा पर्दछ जब फरक पर्दा क्यालिब्रेसनहरू छन् वा बिभिन्न रंग मोडहरूसँग काम गर्दा। हरेक बर्ष प्यालेट नवीकरण गरीयो र समायोजित गरीएको छ त्यसैले यो चाखलाग्दो हुन्छ कि हामी प्राय जसो सूचीमा भ्रमण गर्दछौं।
यद्यपि यो अधिक सिफारिश गरिएको छ कि हामी क्लासिक वा कागज समर्थनमा र get चार्ट प्राप्त गर्न सक्दछौं, धेरै डिजाइनरहरू यसलाई गर्न सक्दैनन् किनकि मूल्य एकदम उच्च छ, यदि म गल्ती नगरेको खण्डमा यसको मूल्य 70० र 300०० यूरो बीच भिन्न हुन्छ। नेटवर्क डिजिटलाइज्ड अवस्थित छ संस्करणहरू जुन कुनै पनि कार्यको लागि कुनै समय उपयोगी हुन सक्दछ, जबकि म तपाईंलाई सम्झाउँछु एडोब फोटोशपको एक एकीकृत डिजिटल क्याटलग छ। यो क्याटलग पहुँच गर्न हामीले केवल निम्न चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्दछ:
हामी कलर प्यालेटमा क्लिक गर्न क्लिक गर्नेछौं अगाडि र .्ग.
पप-अप विन्डोमा त्यहाँ बटन भनिन्छ isर library्ग पुस्तकालय«
माथिल्लो विकल्पहरूमा ट्याब ड्रप गर्नुहोस्। यदि तपाईं यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईं कुन प्यान्टोन क्याटलग प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
अन्तमा चाहिएको छायाँ छनौट गर्नुहोस् र उनीसँग काम गर्नुहोस्।
मैले भने जस्तो तपाईले पहुँच पनि गर्न सक्नुहुनेछ डिजिटल पानाहरू नेट मार्फत। यहाँ केहि उदाहरणहरू छन्:
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » डिजाइन उपकरणहरू » डिजिटल ढाँचामा प्यान्टोन क्याटलग कसरी पहुँच गर्ने?
प्यानटोन रिपोर्ट: शरद / हिउँद २०१/2015/२०१ Sha शेड्स
PNGImg: हजारौं नि: शुल्क छविहरू डाउनलोड गर्नुहोस् PNG ढाँचामा